मोदीको भ्रमणलाई समग्र जनताले विरोध गरे भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन| Nepal Pati
- प्रा.डा. लोकराज बराल
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजकीय भ्रमण एकदमै सफल भएको छ । यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणमा लिनुपर्छ । विगतमा नेपाल र भारतबीच देखा परेका तुसहरू मेटाउने काम भएको छ । दुई देशबीचमा देखा परेका असमझदारीहरूको अन्त्य भएको छ । कमिकमजोरीकोे मूल्याङकन भएको छ । यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जानेछ ।
सामाजिक सञ्जालले देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुनु कुनै अनौठौ र नयाँ कुरा होइन । फेसबुकमा लेखेको कुराले राष्ट्र बन्दैन । हामीले राम्रो र सकारात्मक दृष्टिकोणमा भ्रमणलाई लिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सामान्य ५ प्रतिशत जनताले आक्रोस व्यक्त गरे होलान । त्यसैलाई समग्र जनताले विरोध गरे भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । यसले राम्रो सन्देश पनि जादैन ।
विजेपीका एक नेताले भनेको कुरालाई धेरै अर्थ लगाउनु पनि आवश्यक छैन । नेपालका कतिपयले पनि दार्जिलिङ र सिक्किम पनि त नेपालमा गाभ्नुपर्छ भन्दै आएकै छन् । यसैले यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।
सरकारहरूबीच समन्वय अभाव
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भारत सरकारको कुनै दोष छैन् । मधेसीहरूकै कारणले सम्बन्धमा दरार आएको थियो । देशमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मधेसीहरू पनि सरकारमा छन् । उनीहरूले राखेको गुनासोमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयको अभाव मात्रै हो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बोल्ने कुरै हुँदैन । उनीहरुकै कारणले सम्बन्धमा खटपट भएको थियो । यसको आलोचनामा भारतलाई वीचमा ल्याउनु हुँदैन ।
लाखौ मानिसद्वारा भव्य स्वागत
मोदीको भ्रमणलाई जनस्तरबाट समेत व्यापक रुपमा स्वागत भएको छ । मधेसमा पनि जनताहरूको स्वागतको मास हेरौं । मुक्तिनाथ जस्तो हिमाली ठाउँमा पनि कुनै कमि देखिएन । पशुपति नाथमा र राष्ट्रिय सभा गृहमा समेत मान्छेको चाप निकै थियो । यसलाई हेर्दा स्वागतको कमि भएको लाग्दैन । भ्रमण धार्मिक मात्रै हैन बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन पनि महत्वपूर्ण रह्यो । राजनीतिक सुधार र सहयोग पनि प्राप्त भयो ।
(पूर्व राजदूत समेत रहेका विश्लेषक प्रा.डा. बरालसँग नेपालपाटी डटकमका लागि भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)